4/13/2012 04:34:00 PM
4/13/2012 04:26:00 PM
North Korea's long-range ballistic missile broke apart after its launch early Friday, according to the Associated Press.
The rocket apparently flew 75 miles before it broke into four pieces and crashed into the sea, off the coast of the Korean peninsula.
ရန်ကုန်-ဒလ ကူတို့သင်္ဘော
ထို့သို့သယ်ဆောင်လာသော အိတ်မည်သည့်အရွယ်အစားကိုမဆို တန်စာခ အတင်းအကြပ်ကောက်ခံနေသည့်အပြင် ကောက်ခံသူဝန်ထမ်းမှာလည်း ဆက်ဆံရေးမပြေပြစ် ပဲ
ဟိန်းဟောက်ခြောက်လှန့်ကာ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများထံမှ သတ်မှတ်နှုန်းထားများ၊ ပြေစာဖြတ်ပိုင်းများ မရှိပဲ ပြေစာလွတ်ကောက်ခံနေသည်ဟုသိရပါသည် ။
Myanmar Mediamm သစ်ထူးလွင်
4/13/2012 07:36:00 AM
4/13/2012 05:14:00 AM
4/13/2012 05:02:00 AM
မန္တလေး ၌ လေပြင်းများတိုက်ခိုက် သင်္ကြန်အကြို မန္တလေးမြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ် ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပစဉ် ညနေ ၆ နာရီခန့်၌ လေပြင်းများ တိုက်ခတ်၍ပိရိသတ်ပွဲကြည့်စင်မှ ကြေငြာဗီနိုင်းများ ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် မြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်ရှိ ဗီနိုင်းအချို့အပြင် တခြားမဏ္ဍပ်အချို့မှ ကြောငြာဗီနိုင်းများလည်း စုတ်ပြဲသွားခဲ့သည်။လေပြင်းတိုက်ပြီးနောက် မိုးဖွဲလေးများ ရွာသွန်းခဲ့သည်။
4/13/2012 04:57:00 AM
ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ လွတ်တော်အစည်းဝေးတွေကို NLD ပါတီက ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်ဖို့ မသေချာဘူးလို့ NLD ပါတီက ပြောပါတယ်။ ဒါကလည်း ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် တွေ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုစဉ်တွင်း ရွတ်ဆိုရတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးအစား ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံကို လေးစား
လိုက်နာမယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးပြင်နိုင်ဖို့ NLD အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကြိုးစားနေတာကြောင့် ဖြစ်တယ် လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
“ကျမ်းကျိန်တဲ့ဟာ ဇယား လေး လို့ သူတို့ ပြောတယ်လေ။ အဲဒီ ဇယား လေး ထဲမှာ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး ပါတယ်။ ကျနော်တို့ က ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတဲ့ ဟာကို ကျနော်တို့ အရင် ကတည်း က လက်မခံဘူးလေ။ ကျနော်တို့ မူအရ။ ကျနော် တို့ က လေးစား လိုက်နာမယ်။ အဲဒီ ဟာကို ပြင်ဆင်ရေး အတွက် အန်ကယ်တို့ ကြိုးစားနေတယ်။
ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ အချိန် ကျနော်တို့ တက်မယ်။ အခု အခြေအနေ အရ ပြောရရင်တော့ ၂၃
ရက်နေ့ မှီဖို့တော့ နည်းနည်း ခဲယဉ်းတာပေ့ါလေ။ ဒါ ကျနော်တို့ အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။”
“ကျနော်တို့ ကျမ်း မကျိန်ဘူးပေ့ါ။ အန်အယ်လ်ဒီ က မတက်ဘူး။ ကျမ်းကျိန်မှ တက်မှာ။ ကျမ်းမကျိန်ရင် တက်လို့ မရဘူး။ ကျမ်းမကျိန်ရင် ဧည့်သည် ဖြစ်နေမှာပေ့ါ။ ကျနော်တို့ အဲဒီ ဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြေလည် သွားလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ အကြံပြုချက်ထဲ က တခုခုနဲ့ ပြေလည်သွား လိမ့်မယ် လို့ ကျနော်တို့
“ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုတဲ့ အခါမှာ သုံးတဲ့ စကားလုံးက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်
လို့ဘဲ ပြောပြော လေးစား လိုက်နာတယ် လို့ဘဲ ပြောပြော ကျနော်ကတော့ အတူတူဘဲ သက်ရောက်မှု လည်း ရှိတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လေးစား လိုက်နာတယ် ဆိုတော့ လေးစားတယ် ဆိုတော့ Pay respect ပေါ့။ လိုက်နာတယ် ဆိုတော့ to comply ပေါ့ဗျာ။ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာတော့ safeguard ပေ့ါဗျာ။ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် တာလည်း အခြေခံ ဥပဒေ အရ ဖြစ်လာတဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲ အရဖြစ်လာတဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေ ဟာ အခြေခံ ဥပေဒအရ လုပ်ရမယ် ကိုင်ရမယ့် ဟာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အခြေခံ ဥပေဒ အရ ပြင်ဆင်ခွင့်ကိုလည်း အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ သွားတွေ့တယ်။ ဒီဟာတွေက ကျနော် ထင်တာတော့ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှ လိုအပ်တဲ့ ဟာတွေ ကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးသင့်တယ်
ထင်တယ်။ ဒီ အဝင်မှာ အဲဒီ ကိစ္စတွေ ကို၊ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ ကို သိပ်ပြီးတော့ တွယ်ကပ်နေပြီးတော့ ကြိုးစားနေမယ် ဆိုလို ရှိရင် အစ မကောင်းဘူး
ဖြစ်သွားမှာ ကို ကျနော် က စိုးရိမ်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော် တို့က ဒီလွှတ်တော် ထဲ ကို ဒီ အင်အားစု တွေကို မြန်မြန် ရောက်စေချင်တယ်။”
“လုံးဝ မထင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ လုံးဝ မထင်ပါဘူး။ အခုကို က အခြေခံ ဥပဒေထဲ က တချို့ အပိုဒ် တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ က လွှတ်တော် အမတ်တွေ ကကော၊ ပါတီ မရွေး၊ လူမျိုး မရွေး ကြိုးစားနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလည်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တာ
တမျိုးပါဘဲ။ အခြေခံ ဥပဒေတွေ ကို ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာအောင် ပြည်သူတွေ အတွက် ပိုပြီးတော့ အကျိုးရှိ လာအောင် ပြင်ဆင်တာ ဟာလည်း အခြေခံ ဥပဒေ ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တာပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့် အခြေခံ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာတာဘဲ လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။”
ပြည်သူလွှတ်တော် ဥပဒေကော်မရှင်ထဲက အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းမောင် ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပါရှင်။ NLD ပါတီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၄၃
နေရာထိ အများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီတခု ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃၇ ဦး လွှတ်တော်တက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4/13/2012 04:20:00 AM
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ရှိ ဖော့ဗူး စက်ရုံမီးလောင် သိန်း ၁၈၀၀ ခန့်ဆုံးရှုံး
YC ဖော့ဗူး စက်ရုံးမီးလောင်ပြီးမြင်ကွင်း
ဧပြီ ၁၂ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-သူရမျိုး (YPI ) လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် YC ဖော့ဗူး စက်ရုံ ယနေ့မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး ၃ နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် စက်ရုံတရုံလုံးပျက်စီးသွားကာ ကား ၂စီးလည်း မီးလောင်သည့်အထဲ ပါသွားခဲ့သည်။ တစီးမှာ မတ်တူး ခဲရောင်ဖြစ်၍ အခြားတစီးမှာ အင်ဂျင်ဖြုတ်ချထားသည့် ပစ်ကပ်ကား ဖြစ်သည်။ မီးလောင်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသည့် တန်ဖိုးမှာ သိန်း ၁၈၀၀ ခန့် ရှိသည်ဟု ရဲစခန်းမှ ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စက်ရုံပိုင်ရှင် တရုတ်နိုင်ငံသား ၄ ဦးကို ရဲစခန်းမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းလျှက်ရှိရာတွင် တဦးသာလျှင် ဗီဇာရှိပြီး ကျန် ၃ ဦးမှာ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာမရှိဟုလည်း သိရသည်။ ယခုစက်ရုံတွင် လုပ်သား ၅၀ ဦးဝန်းကျင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်ဟုလည်း
သိရှိရသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၁၀ ရပ်ကွက် ဟေမ၀န်ဈေး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ ဆိုင်ခန်းအားလုံး နီးပါး လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ ။
4/12/2012 05:20:00 PM
စစ်တွေ- ရန်ကုန်ကားလမ်း တိုးချဲ့မှုကြောင့် ရှေ့ဟောင်း ရခိုင်မြို့ရိုးများ ပျက်စီးနေ
ရန်ကုန်-စစ်တွေ ကားလမ်းတိုးချဲ့ရာတွင် ရခိုင်ရှေ့ဟောင်း မြို့ရိုးများကို မြေတူးစက်ကြီးများဖြင့် တူးယူပြီး လမ်းကို ဆည် ဖို့နေသဖြင့် ရခိုင်ရှေ့ဟောင်းအမွေအနှစ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်က စစ်တွေ- အမ်း ရထားလမ်း ဖေါက်လုပ်စဉ် ရှေးဟောင်းဘုရားကို ဖြိုတူးနေစဉ်။
ရှေ့ဟောင်းမြို့ရိုးများ ဖျက်စီးခံနေရသည့် နေရာမှာ မြောက်ဦး စစ်တွေ လမ်းပိုင်းရှိ မြောက်ဦးမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ပေါင်းတုတ်ရပ် အနီးတွင် ဖြစ်သည်။စစ်တွေ-ရန်ကုန် ကားလမ်း တိုးချဲ့ရာ၍ မြေများကို တူးယူနေခြင်း ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီမှာ "သိန်းကျော်" ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။" အခုဖြစ်နေတဲ့နေရာက လေသာတောင်ခံတပ်အနီးက
မြေသား မြို့ရို့တံတိုင်းတွေပါ။ အဲဒီနေရာကို ရှေ့ ဟောင်းသုတေသန ဌာကနည်း ရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာထဲမှာ ပါတယ်။ အဲဒါကို မြေသားမြို့ရိုးတွေကို စက်ကြီးတွေနဲ့တူးပြီး လမ်းကိုဖို့နေတာပါ။ အခုက မြို့ရိုးတွေ ပျက်သွားပြီး ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလမ်းဆုံးအောင်အထိ မြေတွေ တူးမယ်ဆိုရင် မြို့ရိုးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ်။"ဟု ရှေ့ဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု သုတေသတနဌာနမှူး (ငြိမ်း) ဦးကျော်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။ယခုပျက်စီးသွားသည့် မြို့ရို့တံတိုင်းများမှာ မြောက်ဦးခေတ် မြို့ရိုးတံတိုင်းများ ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။"အတွင်းပိုင်းက
မြို့ရိုးတွေကို အုတ်တွေ၊ ကျောက်တွေနဲ့လုပ်ထားပြီး အပြင်ဘက် မြို့ရိုးတွေကို မြေသားတွေနဲ့ လုပ်ထားဖြစ်တယ်။ တောင်တလုံးနဲ့ တလုံးဆက်ပြီး မြေသားတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မြို့ရိုးတွေပါ။ ဂျပန်နဲ့ အိန္ဒိယ ဘက်မှာတော့ မြေသားတံတိုင်းတွေ အများအပြားတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုရှေ့ဟောင်း တံတိုင်းတွေ ဆုံးရှုံးသွားရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆုံးရှုံးမှုပါဘဲ။"ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။မြောက်ဦးမြို့
လက်ဆေးကန်အနီးရှိ လေသာတောင်ခံတပ်နှင့် မြတောင်ခံတပ်ရှိ မြို့ရိုး တံတိုင်းများကိုလည်း မြေတူး စက်များဖြင့် ဖြိုတူးနေသည်ဟု သိရသည်။" ကျွန်တော်တို့က ဒီနေရာဟာ သမိုင်းဝင်နေရာတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ခြားနေရာက မြေတွေကိုဘဲ တူးစေလိုပါတယ်။ အခုလို တူးနေတာကို သက်ဆိုင်ရာနဲ့ မီဒီယာတွေကို အသိပေးရန် အတွက် တူးဖေါ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပို့ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဦးကျော်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။ သိန်းကျော် ကုမ္ပဏီအား ဆက်သွယ်ရာ ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပါ။၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကလည်း စစ်တွေ အမ်းရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင် မြောက်ဦးမြို့ရှိ ရှေ့ဟောင်း အမွေအနှစ်များဖြစ်သည့် ပြည်စိုးကြီးဘုရား၊ မင်းလှခံတပ်၊ မင်းသမီးတံတိုင်း၊ ရဲလှကုန်း၊ သံဇင်တံဘုးရားများ အပါအ၀င် ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် နေရာ အများအပြားဖြတ်သန်း ဖေါက်လုပ်ခဲ့သဖြင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမူများ ရှိခဲ့သည်။
4/12/2012 05:14:00 PM
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဆန်ရှင်အမြန်ရုတ်ဖို့ ကြိုးစားမည်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ သောကြာနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာမည့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကမရွန်း David Cameron က မြန်မာအပေါ် ချမှတ်ထားသော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ယခုခရီးစဉ်အပြီးတွင် အမြန်ရုတ်သိမ်းရန်အတွက် ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကြာသပတေးနေ့ကပြောဆိုလိုက်သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံဟာ
ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်သွားနေတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးတုန့်ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ဒါ့အတွက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမနေသင့်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံး ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိချင်မြင်ချင်ပါသေးတယ်” ဟု ဗြိတိသျှအသံလွှင့်ဌာန BBC အား ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းတရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အနောက်နိုင်ငံများက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂
ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် အပစ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးခြင်း၊ NLD ပါတီအား လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အား တရားမျှတစွာ ကျင်းပပေးခြင်းတို့ကြောင့် မူလက ချမှတ်ထားသော စီးပွားရေး အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ လျှော့ချသွားရန် အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများတွင် သဘောထားများဖြစ်လာကြသည်။ မစ္စတာကမရွန်း၏ ယခုခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပြင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း
သီးခြားစီ တွေ့ဆုံရန်ရှိသည်။ ၀န်ကြီးချုပ် ကမရွန်းနှင့်အတူ ထိပ်တန်း ဗြိတိသျှ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီးများလည်း လိုက်ပါလာမည်ဖြစ်သည်။
4/12/2012 05:08:00 PM
“ သာဓုပါဗျာ “ သံချပ်အဖွဲ့ သည် ပြည်လမ်းရှိ Air Bagan မဏ္ဍပ်တွင် ယနေ့စတင်သံချပ်ထိုးဖျော်ဖြေခဲ့သ
“ ခေါ်တဲ့လူတွေဆီက ပိုက်ဆံရတာ မရတာ အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ဖျော်ဖြေရဖို့ အဓိကပဲ ”ဟု သံချပ်အဖွဲ့ ၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ ကုသိုလ်ကပြောသည်။ ၎င်း
သံချပ်အဖွဲ့သည် Air Bagan မဏ္ဍပ် အပြင် Sky Net ၊ Lucky7၊Naing Group မဏ္ဍပ်များသို့ လည်းဖိတ်ခေါ်ထား၍ သွားရောက်ဖျော်ဖြေမည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။ “ သာဓုပါဗျာ “ သံချပ်အဖွဲ့ သည်မေတ္တာ၊ဗေလုဝ၊ ကုသိုလ်တို့ ဦးဆောင်ကာ အဖွဲ့ ၀င်
၅၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည်။
4/12/2012 04:46:00 PM
သတင်းထောက်များအား ညစာ စားပွဲဖြင့် ဂုဏ်ပြု (ရုပ်/သံ)
11 April 2012 Wed
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ မီဒီယာသမား သတင်းထောက်များအား ညစာ စားပွဲဖြင့် ဂုဏ်ပြု။
ဒီဗွီဘီ မှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ။
4/12/2012 04:14:00 PM
ရှုမ၀အောင်(မြစ်မခ)by Myit Makha Mediagroup on 12 Apr, 2012
ရန်ကုန်မြို့မဟာသင်္ကြန်အကြိုနေ့ ပြည်လမ်းမပေါ်ပုဂံလေကြောင်းရေကစားမဏ္ဍုပ်ကို နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင်
ဖွင့်လှစ်ရာ သံချပ်အဖွဲ့လာရောက် ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး အဆိုပါ သံချပ်အဖွဲ့တွင် ဦးမေတ္တာ၊ ဦးဗေလုဝ၊ ဦးကုသိုလ်တို့ ခေါင်းဆောင်၍ တခြားလူရွှင်တော် ၂၀ ဦးခန့်ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒီလိုသံချပ်အဖွဲ့ သံချပ်ကားထွက်ခွင့်ရအောင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ခွင့်ပြုချက်တင်ရပါတယ်” သံချပ်တွင် စီမံရေးတာဝန်ခံ ဦအောင်သိန်းကပြောသည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်ခန့်ကစ၍ မကြားတော့ကြောင်း သံချပ်အဖွဲ့ဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် ငွေကျပ် သိန်းနှစ်ဆယ်ခန့်ကုန်ကျကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ သံချပ်ကား၏အမည်မှာ သာဓုပါဗျာဟုအမည်ပေးထားကြောင်း သိရှိရသည်။
မီးထိန်ထိန် ယိုးဒယားတို့အိမ် ဒီဘက်ကမ်းက မီးမှိန်မှိန် ကျတော်တို့နေတဲ့အိမ် ဟိုဘက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန် ပေါက်ဖော်ကြီးတို့အိမ် ဒီဘက်ကမ်းက မီးမှိန်မှိန် ကျတော်တို့နေတဲ့အိမ်”ဟု ဦးဗေလုဝ ဦးဆောင်၍ သံချပ်တိုက်ကြသည်။
သာဓုပါဗျာသံချပ်ကားသည် မြို့အနှံ့လိုက်လံဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခု သင်္ကြန်အကြိုနေ့တွင် ပုဂံလေကြောင်းမှ ဦးတေဇ၏ ဖိတ်ကြားမှုဖြင့်လာရောက်ဖျော်ဖြေကြောင်း စီမံရေးတာဝန်ခံ ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။
ဒီလိုအသံတွေမကြားရတာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်သွားပြီ ဒီလိုကြားတော့ ကျတော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်ကို ပြန်သတိရတယ်ဗျာ နှစ်တိုင်းလဲ ဒီလိုဖြစ်စေချင်တယ် ဒီနှစ်သင်္ကြန်တော့ ထူးထူးခြားခြားစကြားရတယ်”ဟု တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက်လေးဆယ်အရွယ် ဦးမျိုးကျော်က ပြောသည်။
4/12/2012 04:07:00 PM
သင်္ကြန်အကြိုနေ့ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်တွင် မီးလောင်
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ ပြင်စည်မင်းသားကြီးလမ်းနှင့် မင်းသိဒ္ဓိလမ်းထောင့်၊ အမှတ် ၂၀၂ ရှိ YC ဖော့စက်ရုံတွင် ယနေ့ မဟာသင်္ကြန်အကြိုနေ့ ညနေ ၂နာရီ ၄၅မိနစ်ဝန်းကျင်က မီးစတင်လာင်ကြွမ်းခဲ့ရာ ယခုညနေ၃နာရီ၃၀မိနစ်ခန့်တွင် မီးညွှန့်ကျိုးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းထံမှ စုံစမ်းသိရရှိသည်။ The Voice Weekly
4/12/2012 03:53:00 PM
ကျွန်းနံ့သာ အနီးပင်လယ်ရေပြင်ထဲမှ မီးတောက်များ မီးခိုးများထွက်နေပုံ
ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ကျွန်းနံ့သာ အနီးပင်လယ်ရေပြင်ထဲမှ မီးတောက်များ မီးခိုးများထွက်နေပုံ။
သံတွဲဒေသခံတစ်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ ထိုကျွန်းကို ဒေသခံများက ကျွန်းနံ့သာဟု ခေါ်ကြပြီး သံတွဲကမ်းခြေနှင့်မဝေးလှကာ၊ ကျွန်းအနီးပင်လယ်ပြင်ထဲမှ ပြာမှုန်များ လေထဲသို ပေလေးငါးဆယ်ခန့်အမြင့်အထိ ထိုးတက်နေသည်ကိုမြင်ရကြောင်းသိရ
4/12/2012 09:43:00 AM
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း မနက်ဖြန် သောကြာနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ခရီးဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo courtesy of Burma Campaign UK
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလအတွင်း လန်ဒန်ရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ၊ ဇိုရာဖန်းနှင့်အတူ မစ္စတာ ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းကို တွေ့ရစဉ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ရှိနေစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားရာမှာ - " မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ စတင်ပွင့်လန်းလာတဲ့ တောက်ပတဲ့ အလင်းရောင်တစ်ကွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်ဟာ အင်မတန်အလုပ်ကြိုးစား၊ သည်းခံမှုနဲ့လည်းပြည့်စုံ၊ တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အ၀ ပွင့်လန်းလာတာကို မြင်ချင်နေသူပါ။ အခု ပွင့်စပြုလာတာကို မြင်နေရပါပြီ။
ဒီအချိန်ဟာ မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ အချိန်ပါပဲ" လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူ့အနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း နောက်ပြန်မဆုတ်ရအောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူအကွဆောင်ရွက်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းဟာ မြန်မာ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးကတည်းက နှစ် ၂၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ ဗြိတိန် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို အလုအယက် သွားရောက်နေကြတာနဲ့အမျှ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာ သူနဲ့အတူ ဗြိတိန်စီးပွားရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်း ပါဝင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
4/12/2012 08:41:00 AM
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်မှု ကုလကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဟာ သမိုင်းတွင်မယ့် ဖြစ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Vijay Nambia က
ပြောလိုက်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီဝင် တချို့ကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသ တချို့မှာ ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ပြီးရှိနေတာ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရာနဲ့ချီ ဆက်ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက ဆွေးနွေးအပြီးမှာ လုံခြုံရေး ကောင်စီရဲ့ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ဆူဇန်ရိုက်စ် က မစ္စတာ နမ်ဘီးယားရဲ့ တင်ပြချက်တွေနဲ့အတူ
ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းတွေကို အခုလို သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
“အထူး ကိုယ်စားလှယ် Vijay Nambia က ရှင်းလင်း တင်ပြထားပါတယ်။ ဧပြီတစ်ရက်
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဟာ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိတယ်။ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တယ်၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ မသမာမှု အသေးအမွှားတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အဲဒါ တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အပေါ် မထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ အရွေးခံခဲ့ရတာဟာ ဘက်ပေါင်းစုံ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သမိုင်းတွင်မယ့် အခွင့်အလမ်း ပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်လို့လည်း မစ္စတာ Vijay Nambia က လုံခြုံရေး ကောင်စီကို ရှင်းပြပါတယ်။
ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) သစ်ထူးလွင်
4/12/2012 08:39:00 AM
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ ဧပြီ (၁၁) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်က နေပြည်တော်က သမ္မတအိမ်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှစ်ဦးဟာ မနက် (၁၁) နာရီကနေ (၁၂) နာရီ (၂၇) မိနစ်အထိ တစ်နာရီခွဲနီးပါးကြာ သီးသန့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်ခံ ဦးခွန်သာမြင့်က ဗီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုအပြည့်အစုံကို နှစ်ဘက်စလုံးက သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။ လွှတ်တော်တွင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကို ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ဦးခွန်သာမြင့်က Reuters သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဧပြီ (၂၃) ရက်နေ့ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထအစည်းအဝေး စတင် ချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တွေ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုတဲ့ အခါ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ ရွတ်ဆိုကြဖို့ဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက Reuters သတင်းဌာနကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီစာသားတွေ ကို အချိန်မီပြင်ဆင်ပေးရင် NLD ရဲ့ ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်ကို တက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း
ဦးဉာဏ်ဝင်းက Reuters သတင်း ဌာနကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ အခုပြီးစီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် သုံးခုထဲမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးဟာ တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အတိအလင်း ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေ့လည်စာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေ့လည်ပိုင်းမှာ နေပြည်တော်ကနေ ရန်ကုန်မြို့ကို ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။
4/12/2012 08:36:00 AM
၁၂ ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ ၈၈ မျိုးဆက် တက်ရောက်
ကယန်းပြည်သူများနှင့် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ
ကရင်ပြည်နယ် လိပ်သိုမြို့နယ်ခွဲ သောက်ရေခပ်ကျေးရွာမှာ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့က ၁၂ ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ကို ကယန်းပြည်သစ်ပါတီက ဦးစီး ကျင်းပတာ ဖြစ်ပြီး ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဗကသ ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ မန္တလေး မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးဝီရသူနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူမှု အထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှ ဦးလှသိန်း၊ ဦးခင်မောင်အေး၊ ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနဲ့ ကယန်းပြည်သူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကယန်းပြည်သစ် တပ်မတော်က အလံတင်ပွဲ အခမ်းအနားအတွင်း စစ်ရေး ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပြီး အလံတင် လွှင့်ထူခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကယန်းပြည်သူတွေက တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အကတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေနဲ့ တရင်းတနှီး ကပြ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ ပညာရေးရန်ပုံငွေထဲက ကယန်းဒေသအတွက် ရန်ပုံငွေ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အသံလှိုင်းက တဆင့် လူထုကို နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
4/12/2012 07:24:00 AM
တရားဟောခွင့်ပိတ်ခံထားရတဲ့ ဒယ်အိုးဆရာတော် (၇) ရက် တရားချီးမြှင့်မည်
အေးနိုင် DVB ၁၁ ဧပြီ ၂၀၁၂
မနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ကနေ တနှစ်တိတိ တရားဟောပြောခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ဒယ်အိုးဆရာတော်လို့ လူသိများတဲ့ ဓမ္မကထိက ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလဟာ ဆရာတော်ကြီးတွေထံ ခွင့်ပန်လျှောက်ထားပြီး ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့ကျနေ ၁၇ ရက်နေ့ထိ တနေ့ကို တရားပွဲနှစ်ပွဲချီးမြင့်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာတော်က မိန့်ပါတယ်။
ဆရာတော် ဟောပြောတဲ့တရားပွဲတခုမှာ တရားဟောပြောခွင့်ကို ပိတ်ပင်တာဟာ အလွန်အပြစ်ကြီးတဲ့အကြောင်း ပါရှိတဲ့အပေါ် ထေရ၀ါဒပိဋကတ်တော်တွေနဲ့မညီ. အာဏာပိုင်တွေကို ထိပါးပုတ်ခတ်တယ်လို့ အကြောင်းပြုပြီး နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က တနှစ်တရားဟောခွင့် ပ်ိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့ ကိုအေးနိုင်ကို ဆရာတော်က မိန့်ကြားထားပါတယ်။
4/12/2012 07:16:00 AM
အင်ဒိုနီးရှာနိုင်ငံဆူမားတြားမြောက်ပိုင်း ငလျင်လှူပ်ခတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဆူနာမီစောင့်ကြည့်ရေးဗဟိုဌာနများ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ မြန်မာကမ်းရိုးတန်းသို့ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း ခန်းမှန်းထားခဲ့သော်လည်း
ခန့်မှန်းထားသည့်အချိန် အတွင်း ထူးခြားမှူမရှိခြင်းကြောင့် ဆူနာမီသတိပေး
ချက်အားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှူ
ဦးစီးဌာနက နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှ ည ၇နာရီဝန်းကျင်ခန့်က ထပ်မံကြေငြာသည်။
4/12/2012 06:19:00 AM
ဦးခင်ညွန့် အင်တာဗျူးမပေးဘူးဆိုသည့် ပြောကြားချက် ဘန်ကောက်ပို့စ် ငြင်းဆို
ဦးခင်ညွန့် ကို အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ ဦးမြင့်ရွှေ (ဓါတ်ပုံ-မြင့်ရွှေ Facebook)
ကိုထွေး DVB ၁၁ ဧပြီ ၂၀၁၂ ၂၀၀၃ ခု ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကယ်တင်ဖို့ လူလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်း
ဦးခင်ညွန့်က ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာပါ ရေးသားချက်ဟာ မှားယွင်းတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရက ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ ဧပြီ ၈ ရက်နေ့ထုတ် ထိုင်းနိုင်ငံ
ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာပါ ဦးခင်ညွန့်အကြောင်း ဆောင်းပါးတခုမှာ ဒီပဲယင်း လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်စဉ်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကယ်တယ်ဖို့ လူလွှတ်လိုက်တယ်လို့ ဦးခင်ညွန့်က ပြောဆိုတယ်ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးအပေါ် ဒုရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင် အပါအ၀င်
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေက ဦးခင်ညွန်အနေနဲ့ ဘန်ကောက်ပို့စ်ကို အင်တာဗျူးပေးခဲ့ခြင်း မရှိဘူးလို့ ဒီကနေ့ ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ပြည်ပအခြေစိုက် ဦးမြင့်ရွှေနဲ့ Songpol Kaopatumtip တို့ ပူးပေါင်း ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို တာဝန်ခံတဲ့ ဘန်ကောက်ပိုစ်သတင်းစာရဲ့ အချပ်ပို Spectrum ကဏ္ဍ အယ်ဒီတာက ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးသားရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ Songpol Kaopatumtip ကိုလည်း ဒီဗွီဘီက မေးမြန်းရာမှာ ဦးမြင့်ရွှေ ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဦးခင်ညွန့်အိမ်မှာ အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ “မတ်လလယ်လောက်မှာ အင်တာဗျူးခဲ့တာပါ။ အသေချာတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။” ဦးခင်ညွန့်ဟာလည်း ဒီဆောင်းပါးအကြောင်း အင်တာနက်နဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ပါရှိပြီးတဲ့နောက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သာသနာ့ဘောင်ကို ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေ ၃၀ ရက်ညက စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲယင်းမြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ စည်းရုံးရေးယာဉ်တန်းကို အမည်မသိ သူတွေက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ လူတချို့ သေပျောက်ဒဏ်ရာရခဲ့သလို တပ်မတော်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် တိုက်ခိုက်ခံရသူတွေကို အရေးယူထောင်ချခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာရှင်အချို့အားသင်္ကြန်ဖျော်ဖြေခွင့် ပိတ်ခြင်းမရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဆို
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ ရှင်းပြစဉ်
ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့၂၀၁၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် အနုပညာရှင် အချိ့အား
သင်္ကြန်ဖျော်ဖြေရေးတွင် ပိတ်ပင်ထားသည်ဟူသော သတင်းများမှာ လုံးဝ
မဟုတ်မမှန်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေက
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဧပြီ ၁၁ရက်
ညနေ၆နာရီခွဲက တိုင်းဒေသကြီဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ရန်ကုန် အခြေစိုက်
မီဒီယာအချို့တွှေု့ဆုံစဉ် ဝန်ကြီးချုပ်က ငြင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
`အခု အဆိုတော်အချို့ကိုသကြီန်သီဆို ခွင့်ပိတ်တယ် ဘာညာဆိုပြီးသတင်း
ဒီသတင်းဟာ လုံးဝမဟုတ်မမှန်ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ကြည့်တော့လဲ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေနဲ့ အဲသလိုပိတ်ပင်တာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတာသိရပါတယ်`ဟု
“ကြုံရင်လဲ သူတို့နဲ့တွေ့ရင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပိတ်တာလဲ မေးကြည့်ပေးပါဦး“
ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သင်္ကြန်ပွဲတော်၌ သင်္ကြန်သံချပ်များ
ထိုးခွင့်ပိတ်ထားသည် ဟုပြောဆိုနေကြခြင်းမှာ လည်းမဟုတ်မမှန်ကြောင်း ဦးမြင့်ဆွေကပြောသည်။“ကျွန်တော်တို့က ထိုးမယ့်သံချပ်စာသားတွေကို
အဓိကက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား
စည်းလုံးညီညွတ် မှု၊ချစ်ကြည်မှုကိုပျက်ပြားစေတာတွေမပါစေချင်လို့ပါ” ဟု
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်း များအတွင်း အင်တာနက် ဖေ့စ်ဘုတ်လှုမှုရေးစာမျက်နှာ
များတွင် အဆိုတော်အချို့ သကြီန်ကာလသီဆို ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရခြင်း၊ သင်္ကြန်
သံချပ်များ ထိုးခွင့်ပိတ်ပင်ခံရခြင်း များရှိနေသည် ဟူသော ရေးသားချက်
အချို့ရှိခဲ့ပြီးနောက် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲက သတင်းမီဒီယာ အချို့နှင့်
4/12/2012 05:35:00 AM
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိစ္စ အနီးကပ်စောင့်ကြည်ရန် တင်ပြမည်ဟု အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ပြော
ဧပြီ၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂-ကျော်စိုးလင်း (YPI)
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရန် တင်ပြမည်ဟု အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျိမ်းစ်ဟင်နရီဝဘ် (ဂျင်ဝက်ဘ်) ကယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
၎င်းက “ ၀ါရှင်တန်ကိုပြန်ရောက်ရင် နှစ်နိုင်ငံကြားက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိစ္စကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် တင်ပြမယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်မယ်” ဟု ပြောသည်။
အစိုးရ နယ်ပယ်တိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အခြေအနေကောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ၀ါရှင်တန် ဒီစီသို့ ပြန်ရောက်ပါက ကြီးမားသော ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းကပြောသည်။
ထို့ပြင် ဂျင်ဝက်ဘ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော ကိုးလကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လက္ခဏာများ တွေ့ရကြောင်း၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင်ဖြည်းညှင်းစွာ ပြောင်းလဲရမည်ကိုလည်း လက်ခံကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုလည်း လက်ခံကြောင်းလည်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားသည်။
အခြားတိုင်းပြည်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုတွင် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင်လာမည်ဟု ၎င်းအနေဖြင့်ယုံကြည်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင်ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဂျွန်ဟင်နရီဝဘ်က ပြောသည်။
ဆယ်စုနှစ် တခုကျော်ကြာ စီးပွားရေး၊ သံတမန်ရေး၊ အခြားသော ပိတ်ဆို့မှုများကို
ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့က လုပ်ဆောင်ထားရာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်
ဦးဆောင်သည့် အစိုးရတက်လာပြီးနောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည့် နောက် ပိတ်ဆို့မှုများအား ရုပ်သိမ်းပေးရန် စဉ်းစားလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျင်ဝက်ဘ်သည် ယခုလ ၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာကာ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ။
ရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဂျင်ဝက်ဘ်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက
အမေရိကန် သံရုံးတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် သွားသည်။
4/12/2012 05:26:00 AM
ရွှေဥ ယူမလား ငန်းယူမလား
ဂျာမဏီ တွင် အခြေစိုက်သော ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုမှ ယနေ. အကြောင်းပြန်စာ ရောက်လာ သည်။ ရက်သတ္တပတ် သုံးပတ်မျှ ကြာမြင်.မည်. ၎င်း ၏ စီးပွားမိတ်ဖက်များအတွက် ကျေးဇူး တုံ.ပြန်သည်. အနေနှင်. မေတ္တာဖြင်. စီစဉ်ပေး သော ခရီးစဉ် (Incentive Tour) တစ်ခု ပတ်သတ်၍ အကြောင်းပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရီးသည် အရေအတွက် ၈၀ ခန်. မြန်မာနှင်.ဗီယက်နမ် တစ်နိုင်ငံ မဟုတ် တစ်နိုင်ငံ သွားရောက် လည်ပတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုခရီးစဉ်နှင်. ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း နေခဲ.သည်မှာ လွန်ခဲ. သော တစ်လလောက်ကတည်းက ဖြစ်ပြီး ယနေ. အကြောင်းပြန်သည် မှာ ယင်းအာမခံ ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ.သည် မြန်မာ နှင်. ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံအနက် ဗီယက်နမ် ကို သွားရောက် လည်ပတ်ရန် ရွေးချယ်လိုက်သည်. အကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ် ကို ရွေးချယ်ရသည်. အကြောင်းအရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင်. ယှဉ်လိုက်လျှင် ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းများ အလွန်အမင်း သက်သာ သောကြောင်. ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို.ထက်ပို၍ လေးနက်သော အကြောင်းပြချက်မှာ “Value for Money” ဖြစ်သည်. ပေးရသည်. ပိုက်ဆံနှင်. ပြန်ရသော တန်ဖိုး ၊ ၀န်ဆောင်မှု အရည်အသွေး ၊ စိတ်ကျေနပ်မှု တို.တွင် ဗီယက်နမ် က မြန်မာ ထက် များစွာ သာသည် ဟူ၍ဖြစ်လေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းများသည် မလိုလား အပ်သော Transction Cost များကြောင်. ယခင်နှစ်များ ကတည်းက ပင် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများနှင်. ယှဉ်ပါက များစွာကြီးမြင်.လျှက် ရှိနေခဲ.ပြီးဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းများ ကြီးမြင်.သော် လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ အတွက် ၀န်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဟု နာမည်မကျော်ကြားခဲ. ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ များ (Tourism Infracture) ပြည်.စုံကောင်းမွန် လွန်းသော နိုင်ငံ ဟူ၍လည်း နာမည်မကျော်ကြားခဲ. ၊ နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည်. ခရီးသည်များအတွက် လွယ်ကူ၍ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင် ၍ ပြည်ဝင်ခွင်. ရယူရာတွင် အလွယ်ကူဆုံးနိုင်ငံတစ်ခု ဟု မကျော်ကြားခဲ. ၊ အားမနာတမ်းပြောရလျှင် ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှုပ်ထွေးပွေလီ၍ ကမ္ဘာ.အလယ်တွင် နားလည်ရအခက်ခဲဆုံး နိုင်ငံ ဟူ၍သာ ကျော်ကြားခဲသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အထောက်အပံ.ပေးသောအင်္ဂါရပ်များ (Tourism Facility) အပိုင်းကို ကြည်.လျှင်လည်း လွန်စွာအားနည်း သည်မှာ အားလုံးအသိ ပင်ဖြစ်သည်။၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော ကားများသည် အခြား နိုင်ငံများ မှ အသုံးပြုပြီးသော ကားဟောင်းများဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်အများစုမှာ နိုင်ငံတကာအဆင်.အတန်းမမီကြ ၊ အထူးသဖြင်. သက်တမ်း ဆယ်စုနှစ်နှစ်စု ရှိလုနီးပါး ရန်ကုန်မြို.ရှိ ဟိုတယ်ကြီးအများစုမှာ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေကြသည်။ အချို.ဟိုတယ်များ၏ နံရံများသည် အက်ကွဲနေကြသည်။ အချို. ဟိုတယ်များ၏ ပရိဘောဂများ သည် အရောင်ပြယ်လွင်.၍ပျက်စီးလုနီးပါးဖြစ် နေကြသည်။ သို.သော် ယင်းတို.သည် အခြားနိုင်ငံများထက် ပိုသောဈေးနှုန်းကို ယူထားကြသည်။
ယခင် နှစ်များစွာကတည်းက ကြီးမြင်.ခဲ.သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းတို. သည် ယခု အခါ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ က ပျက်ရယ်ပြု သည်.အခြေအနေထိ ရောက်ရှိအောင် ထပ်မံမြင်.မားလျှက်ရှိနေလေသည်။ လွန်ခဲ.သည်. လ အနည်းငယ်ခန်.မှ စ၍ ဟိုတယ်အများအပြား၏ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ နှင်.ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်များ တွင် အခန်းခများ၏ ဈေးနှုန်းသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ မြင်.တက်လာကြသည်။ အချို. ဟိုတယ်ကြီးများသည် ယခုအချိန်ထိ ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ နှင်.စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိပေ။ ရာသီအလိုက် စာချုပ်ချုပ်ဆို ၍ ဈေးနှုန်းသဘောတူထားရသော ခရီးသွား လုပ်ငန်းများသို. ဟိုတယ်အခန်းမရောင်းချင် သည်.သဘောကို အတိအလင်း သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍ သော်လည်းကောင်း ဖော်ပြလာကြသည်။ တစ်ချိန်က မြန်မာ. နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး အခြေအနေများအရ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ကိုသာလျှင် အဓိက မှီခိုအားထား ၍ ရှင်သန်ခဲ.ရသော ဟိုတယ်များသည် ၊ ယခု အစိုးရသစ်လက်ထက် နိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ၊ တိုးတက်လာမှု များကြောင်. ၊ တစ်ဟုန်ထိုး တက်ရိပ်ပြလာသော ကော်ပိုရိတ်ဈေးကွက် (Corporate Segment) ကို အားကိုးအားထားပြုလာကြသည်။ Corporate Segment အားမကောင်းခင် အချိန်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ကို “အခန်းသုံးပေးပါဦး” ဟု ဟိုတယ်များ၏ တောင်းဆိုသော လေသံများသည် ယခု အခါ “အခန်းမပေးနိုင်ဘူး” ဟု ငြင်းပယ် သော လေသံများအဖြစ်ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲသွားကြသည်။ ဟိုတယ်များ၏ ဈေးကွက်အပိုင်းအခြား အလိုက် အခန်းနေရာချထား မှုများတွင် (Rooms Allotment by Segment) ခရီးသွားကုမ္ပဏီများ အတွက် အရည်အတွက် အနည်းဆုံးသို. လျှော.ချထားကြပြီး ၊ ဟိုတယ်သို. တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်သော ဧည်.သည်များ (Walk in Guests) ၊ Online မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်သော ဧည်.သည်များ နှင်. ကော်ပိုရိတ် ဈေးကွက် (Corporate Segment) မှ ဧည်.သည် များအတွက်သာ Allotment များများ ချန်ထားခြင်းများ ရှိလာကြသည်။ ခရီးသွားကုမ္ပဏီ များ မှ စာချုပ်ချုပ်ထားသောဈေးနှုန်းဖြင်. အခန်းလိုချင်လျှင် မရ သော်လည်း ၊ Online မှ တဆင်. အင်တာနက် ဈေးနှုန်းဖြင်. ၀ယ်လျှင် အခန်းရမည်ဖြစ်သည်အထိ ပြောလာကြသည်။ စာချုပ်ချုပ်ထားသော ဈေးနှင်. အင်တာနက်ဈေးနှုန်းမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သို.မဟုတ် နှစ်ဆခန်. ကွာသည်။ တစ်ချိန်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အတွက် ကိုင်းကျွန်းမှီ ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီ အလုပ်လုပ်ခဲ.ကြသော ၊ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများဟု ယုံကြည်ခဲ.သော ဟိုတယ်အများစုသည် လိုလျှင်ပေါင်း မလိုလျှင်မပေါင်းတော.သည်. Fair-Weather Friend များဖြစ်သွားပြီလား ဟုမေးစရာရှိလာပါတော.သည်။
ရေရှည်ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှု က အရေးအကြီးဆုံး
ဟိုတယ် တစ်လုံးအတွက် အဓိကရောင်းကုန်ဖြစ်သည်. အခန်းများသည် ယနေ. ဧည်.သည် မ၀င်၍မရောင်းရလျှင် ယင်းအခန်းများ ၏ ယနေ.၀င်ငွေ ဆုံးရှုံးမည် (Perishable ) ဖြစ်၍ ၊ Yield Management သို.မဟုတ် Revenue Management ဟုခေါ်သော ၊ ဟိုတယ်တွင်ရှိသည်. အခန်းအရေအတွက် ၊ ဧည်.သည် ၀င်ရောက်မှု အခြေအနေ ၊ ဈေးကွက်အပိုင်းအခြား ၊ အခန်းခဈေးနှုန်း စသည်. အချက်များ အပေါ်မူတည်၍ အမြတ်အစွန်းအများနိုင်ဆုံးများများ ရအောင် စွမ်းဆောင်သည်. စီမံခန်.ခွဲမှု ပညာသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ် သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါ ဟိုတယ်များသည် Yield Management ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနေသည် ယုံမှားသံသယ ဖြစ်စရာမလိုပေ။ ဟိုတယ် များအတွက် Yield Management ၏ အဓိကအချက် သည် မိမိရောင်းကုန်များ (အခန်းများ) ကို အသင်.တော်ဆုံးအချိန် (Right Time ) တွင် အသင်.တော်ဆုံး ၀ယ်သူ (Right Customer) အား အသင်.တော်ဆုံးသော ဈေးနှုန်း (Right Price ) နှင်. ရောင်းချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Right Time ဆိုသည်မှာ ဈေးကွက်၏ ၀ယ်လိုအားအများဆုံးအချိန် ၊ Right Customer ဆိုသည်မှာ ဈေးနှုန်းအမြင်.ဆုံးပေးသောသူ ၊ Right Price ဆိုသည်မှာ အမြင်.ဆုံးသောဈေးနှုန်း ဟု ယေဘုယျ ယူဆနိုင်သော်လည်း ထိုထက်ပို၍ လေးနက်ပါသည်။ ယင်းဟိုတယ်တည်ရှိသော တိုင်းပြည် ၏ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး အခြေအနေ ၊ ဈေးကွက်၏ လားရာ (Market Trend) ၊ စီးပွားဖက် များ နှင်. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (Relationships) ၊ Industry တစ်ခုလုံး၏ ရေရှည်တိုးတက်မှု (Sustainability) စသည်အချက်များ ပေါ်တွင်မူတည်၍ ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ရသည်. အခါများလည်းရှိပါသည်။ အမြဲတမ်းဈေးနှုန်း တက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဈေးနှုန်းများ ကို ချပေးရသည်. အခါများလည်းရှိပါသေးသည်။ ၀င်ငွေ (Revenue) အများ ဆုံးရရှိရန် စွမ်းဆောင် ကြခြင်း သည် ဟိုတယ် များ အတွက် ရပိုင်ခွင်. သို. လုပ်ပိုင်ခွင်. (Right) တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်ရဖို.တစ်ခုတည်း အတွက် ကြည်.နေလျှင် သင်.လျော်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ Industry တစ်ခုလုံး၏ အကျိုးစီပွားကို လည်း ကြည်.ရန်လိုအပ်ပါသေးသည်။ မိမိလုပ်ငန်းအဖွဲ.အစည်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ၀န်ထမ်းများ ၊ ဧည်.သည်များ ၊ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကဲ.သို.သော စီးပွားဖက်များ စသဖြင.် ပါဝင်ပတ်သတ်သမျှ Stake Holders အားလုံး၏ အကျိုး ကိုကြည်.ရန်လိုအပ်ပါသေးသည်။ ဘယ်သူသေသေငတေမာ စိတ်ဓါတ်မျိုးဖြင်. ရေရှည်ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာရန်မလွယ်ကူပေ။ မြန်မာပြည်ရှိဟိုတယ်များသည် အခွင်.အရေးလေး ရခိုက် ရှေ.နောက်မစဉ်းစားမဆင်ခြင် ၊ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ညာသံပေး၍ ဈေးတက်လိုက်ကြသည်မှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပြင် ကမ္ဘာ.အလယ်တွင် ပျက်ရယ်ပြုချင်စရာဖြစ်နေလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း မှာ အစကောင်းလိမ်.မည်မဟုတ်ပါချေ။
တစ်ဖက်မှ ကြည်.လျှင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များသည် စီးပွားရေးသမားများဖြစ်ရာ အမြတ်အစွန်းကို ကြည်.၍ အလုပ်လုပ်ကြသည် ဖြစ်သောကြောင်. ဈေးနှုန်းမြင်.တက် မှုများအတွက် ယင်းတို.ကိုချည်း အပြစ်တင်နေရန် မသင်.တော်ချေ။ အဓိကပြဿနာမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ မလုံလောက်မှုကြောင်.ဟု ဆိုလျှင်မှားလိမ်.မည်ဟုတ်ပါ။ စီးပွားရေးသမားများအနေနှင်. ၀ယ်လိုအားများ၍ ရောင်းကုန်နည်းလျှင် ဈေးနှုန်းတက်မည် မှာ ဓမ္မတာ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ဟိုတယ်များအတွက် ၀ယ်လိုအားနည်း၍ ရောင်းကုန်များ မစွံ (Over Capacity, Depressed Demand) ဖြစ်ခဲ.သော ကာလ ကုန်လွန်သွားပြီး ဖြစ်သည် မှာလည်း သိသာနေပေသည်။ ထို.ကြောင်. တိုးတက်လာ သော ၀ယ်လိုအား (Demand) များ ကိုဖြည်.ဆည်း နိုင်ရန်အတွက် ဟိုတယ်အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာရန် လိုအပ်ပေသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက် မှု အတွက် လွတ်လပ်သော စီးပွားရေး ဈေးကွက် (Liberal Economy) တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်. ဈေးကွက် အတိုင်း လွတ်လပ်ခွင်.ပေး ရသည် ဆိုသော်လည်း ၊ အစိုးရ က တစ်ထောင်.တစ်နေရာ မှ ပါဝင် ပတ်သတ် ရေးသည်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အရေးပါလှပါသည်။ ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသည်. ဟိုတယ် အခန်းခများ ဈေးတက်ခြင်း ၊ ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းများ မြင်.တက်နေခြင်းတို.ကို အစိုးရအနေနှင်. အချိန်မီ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းပေးသင်. ၊ ပေးနိုင် ပါသည်။ ဒေသတစ်ခု၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဓိက အရင်းအမြစ်ကြီး သုံးခု ဟု သတ်မှတ်ကြသည်. အေသုံးလုံး ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် (Accessibility (အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ.စွာ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်မှု) ၊ Accommodation ( စားသောက်နားခိုရန် နေရာထိုင်ခင်း ဟိုတယ် ၊ မိုတယ် ), Attraction (သဘာဝအလှအပ ၊ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ဒေသ ၊ အဆောက်အဦး ၊ ပြတိုက် စသည်)) အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍသည်မပါမဖြစ် အရေးကြီးပါသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မြို.ပေါင်း (၄၆) မြို.၌ ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း (၆၉၁) လုံး ၊ အခန်းပေါင်း (၂၇၀၀၀) သာရှိ၍ နိုင်ငံသားခရီးသွား ဧည်.သည်များ သန်းနှင်.ချီ၍ တစ်ရှိန်ထိုး ၀င်ရောက်လာလျှင် အခန်းမလောက်ငှနိုင်သည်မှာ ဗေဒင်မေးစရာတောင်လိုမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင်. ဒေသအသီးသီးတွင် ဟိုတယ် မိုတယ် အသစ်များ ၊ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လျင်အမြန် အကောင်အထည်ဖော် ရေး ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ အခြားအခြားသော Tourism Infracture များ ဖွံ.ဖြိုးရေးအတွက် ၀န်ကြီးဌာနများ အချင်းချင်း ညှိနှိုင်း၍ အလျင်အမြန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန်မှာ အစိုးရ၏ အလွန်အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လေသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံ၏ လတ်တစ်လော အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသေးသော ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီး၏ စီမံကိန်းများစွာ ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သောကြောင်. ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပါအ၀င် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ၊ တိုင်းပြည်အတွက် ၀င်ငွေရှာဖွေ ပေးနိုင်သော စီမံကိန်း များစွာ ကို စတင်သင်.ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ကမ်းခြေဒေသများ တွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင်. မိမိကိုယ်ပိုင် မီးစက်ဖြင်. လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သုံးစွဲနေရသော ယင်း ကမ်းခြေဒေသများ ရှိ ဟိုတယ်များ ၏ အပိုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော.ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင်. တည်းခိုခများ ၊ ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းများ လျော.ကျသွားနိုင်ပါသည်။ ထို.အတူ လေယာဉ်ကွင်းများကို နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်နိုင်အောင် အဆင်.မြှင်. တင်ပေးခြင်း အားဖြင်. နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ ၀င်ပေါက်တစ်ခုတည်းမှ စုပြုံဝင်ရောက်နေခြင်းကို ရှောင်လွှဲ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင်. ရန်ကုန်ကဲ. သို. အဓိကလေကြောင်း ၀င်ပေါက် ကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲ နေရ သော ခရီးစဉ်များ နေရာ တွင် အခြား ဒေသ များ ကိုအခြေခံ ၍ ရေးဆွဲသော ခရီးစဉ်များ ဖြင်. အစားထိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ရန်ကုန် ရှိ ဟိုတယ်များ တွင် ဧည်.သည်များ စုပြုံနေခြင်း လည်း အထိုက်အလျောက် လျော.ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပုဂံ ၊ မန္တလေး ၊ နေပြည်တော် တို.တွင် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများ တိုက်ရိုက် ဆင်းသက်နိုင် ထွက်ခွာနိုင်ခဲ.လျှင် ၊ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ သည် ထိုမှ တဆင်. အခြား မြန်မာပြည် အနှံ.အပြားသို. သွား နိုင်လျှင် ရန်ကုန် ကို မဖြစ်မနေ ၀င်ရခြင်း ၊ ညအိပ်ရခြင်း ၊ ရန်ကုန် မှ သာ ပြန်လည်ထွက်ခွာ ရခြင်း စသည်တို.ကို ရှောင်လွှဲ နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် နှစ်ခါကုန်ကျသည်. သယ်ယူပို.ဆောင်ရေးစရိတ် ၊ ဟိုတယ်ခ ၊ စားစရိတ် စသည်တို. သက်သာသွားသော ကြောင်. ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းများ လည်း လျော.သွား နိုင်ပါသည်။ ပြည်တွင်လေကြောင်းလိုင်းများ အပေါ်ရိုက်ခတ်မှု ရှိနိုင်သော်လည်း ရေရှည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်ပါသည်။ ထို.ကြောင်. တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင်. စာရွက်ထဲတွင် ရေးသားထားသော မူဝါဒများ ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ယခုအချိန်တွင် အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင်.နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဖြေးဖြေးနှေးနှေး သွားရန်အချိန် မဟုတ်တော.ပါ။၊ မြန်မာ.ခရီးသွားလုပ်ငန်း နာမည်မပျက်မီ အချိန်မီ အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်သင်. ပါသည်။ တာဝန်ရှိသူများသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဟူ၍ တစ်ပွဲနှင်.တစ်ပွဲ ရက် (၂၀) သာ ခြားသော Miss Tourism ရွေးချယ်ပွဲ နှင်. Miss Myanmar International ရွေးချယ်ပွဲများ ကို အားသွန်ခွန်စိုက် အင်တိုက်အားတိုက် ကျင်းပခဲ.ခြင်း အရှိန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း၍ အခြား ကဏ္ဍ နှင်. လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လည်း အရှိန်အဟုန် နှင်. အားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်သင်.ပါသည်။
ယခုလို အကူးအပြောင်းကာလ (Transitional Period) သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အနည်းငယ်မျှ အမှားမခံနိုင်သော အချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုဖြစ်နေသော ဟိုတယ်အခန်းမလုံလောက်မှု နှင်. ဈေးနှုန်းများမြင်.တက်မှု ပြဿနာသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ၊ ဟိုတယ်အုပ်စုကြီးများ ၀င်ရောက်လာလျှင် ပြေလည်သွားမည် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းအချိန်သို. မရောက်မီမှာပင် မြန်မာ.ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ညှိုးနွမ်းသွားဖွယ်ရာရှိပါသည်။ ယခုအချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင်. မည်သည်.ကဏ္ဍတွင်မဆို ဂုဏ်သတင်းညှိုးနွမ်းရမည်. အချိန်မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာအလယ်တွင် နာမည်ကောင်းတစ်ခု ရယူရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အပျိုဖြန်းလေး ဟုဆိုလျှင် ထိုအပျိုဖြန်းလေး ချောကြောင်း လှကြောင်း အကျင်.စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း စသည်. ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာနှင်. နာမည်ကောင်းဖြင်. ကျော်ကြားရန် လိုအပ်သည်။ ပွင်.ဖူးစအပျိုဖြုန်းလေး ပန်းကောင်းလေး အညွန်.မကျိုးဖို. ၊ နာမည်မပျက်ဖို. ကာကွယ်ရန်မှာ အစိုးရ အပါအ၀င် Stake Holders အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင်. နိုင်ငံခြားပိုင် ဟိုတယ်ကြီးများ၌ အလွန်အရေးကြီးသော ထိပ်တန်း စီမံခန်.ခွဲရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေနှင်.လည်း မိမိမျက်နှာရရေးတစ်ခုတည်း မကြည်.မိရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ အရိပ်နေနေ ၊ အခက်ချိုးချိုး ဆိုသလို နိုင်ငံခြားသားများမှ ကိုယ်.ဒေသ ကိုယ်ရေမြေပေါ်တွင် အကျိုးအမြတ်ကိုရယူသွားပြီး ၊ကိုယ်.နိုင်ငံသာ နစ်နာစေခဲ.ခြင်းမျိုးများကို အားပေးအားမြောက် မပြုမိစေရန် ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မီးခိုးမထွက်စက်ရုံ (Smokeless Industry) ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်. ခရီးသွားလုပ်ငန်း သည် နိုင်ငံတော်တော်များများတွင် နိုင်ငံ. ၀င်ငွေရှာဖွေပေး သည်. နေရာ၌ ထိပ်တန်းနေရာရှိကြသည်မှာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်။ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ စွာကို ကိုယ်.နိုင်ငံထက် ကြုံတွေ.ခဲ.ရသော ဒေသတွင်း အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ်သည်. ထိုင်းနိုင်ငံ သည် ၂၀၁၁ အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ စံချိန်တင် ၀င်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံခန်. ရရှိခဲ.သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ကဲ.သို. အခွင်.အရေးများ ရလာပါလိမ်.ဦးမည် ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အမြတ်အစွန်းများစွာ ရရှိလာပါလိမ်.ဦးမည် ၊ အခွင်.အရေးသည် လက်တစ်ကမ်းတွင် သာ ရှိနေပါတော.သည်။ ယခုပင်လျှင် မြန်မာ.ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင်. ပတ်သတ်၍ သတင်းကောင်းများ လည်း ကြားလာရသည်။ ဟယ်လာရီကလင်တန် မြန်မာနိုငငံသို. လာရောက် အပြီး CNN က ကမ္ဘာပေါ်တွင် သွားရောက် လည်ပတ်ရန်အကောင်း ဆုံး တတိယ နေရာ၍ မြန်မာ ဟု ဖော်ပြခဲ.သည်။ Lonely Planet Magazine က ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် သွားရောက် လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံး ၁၀ နိုင်ငံအနက် မြန်မာ နိုင်ငံကို ဒုတိယနေရာတွင် ဖော်ပြခဲ.သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင်. ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာနမှလည်း ယခုနှစ် ၂၀၁၂ တွင် ခရီးသည် ၁ သန်းကျော် ၀င်မည်ဟု ခန်.မှန်းထားသေးသည်။ တစ်ဖန် မြန်မာနိုင်ငံသို.လာရောက်သော နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များအတွက် မကြာမီ E-Visa စတင်ထုတ်ပေးသွားမည်ဟု ကြားသိရသည်။ ခရီးစဉ်များ ဈေးနှုန်း ကြီးမြင်.လာမှု နှင်. ဟိုတယ်ခများ ဈေးတက်သည်. သတင်းကလွဲ၍ အားလုံး အားလုံး သတင်းကောင်းများချည်။ ဖြစ်ကြသည်။ ထို.ကြောင်. ခြုံငုံ၍ သုံးသပ်ရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း သည် မကြာမီ အချိန်အတွင်း ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်လာမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင်ဖြစ်သည် ။ ဟိုတယ်များ အနေနှင်. ၊ သယ်ယူပို.ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအနေနှင်. လည်း မိမိတို.၏ ဈးနှုန်းများ ကို မြှင်.တင်လိုက်ခြင်းဖြင်. ရရှိမည်. အကျိုးအမြတ် နှင်. ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး ဈေးနှုန်းမြင်.မားလွန်းသောကြောင်. ကိုယ်.နိုင်ငံကို မရွေးဘဲ အခြားနိုင်ငံများသို. သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ရွေးချယ်လိုက်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာမည်. Opportunity Cost နှစ်ခုအကြား မည်သည်. အရာကို ရွေးမည်နည်းဟု တွေးတွေးဆဆဖြင်. ချိန်ထိုးတတ်ရန် သာ လိုအပ်ပါတော.သည်။ ဥပမာဆောင်ရသော် မြန်မာ.ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ရွှေဥ အုပေးမည်. ငန်းတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ထို.ကြောင်. ရွှေဥအုပေးမည်. ငန်းကို တစ်နပ်စာချက် မစားမိရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ဟိုတယ်များ အပါအ၀င် ၊ အခြား ကဏ္ဍအစုံမှ Supplier များနှင်. Tourism Industry တစ်ခုလုံး၏ Stake Holders များမှ အထူးဂရုပြုသင်.လှ ပေသည်။
၂၆ ၊ မတ်လ ၊ ၂၀၁၂
The Voice Weekly News Journal Vol 8-No-17